Maitiro ekugadzirisa "Kudzoreredza Isingawanikwe" muApp Store | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa "Kudzorerazve isingavharike" pane iyo App Store
Iko kukanganisa kuri kuunza vazhinji vashandisi veIOS kumisoro yavo nguva pfupi yadarika, uye ndeyekuti iyo "Kudzosera pasi isingawanikwe" zvinotitadzisa kutangazve kurodha pasi maapplication ataive tambodzosa. Sevazhinji venyu munoziva, tinogona kukumbira kudzorerwa kuchikumbiro kubva kuApple kana chisingazadzise zvinangwa zvinoratidzwa mukusimudzira kwayo, kana kana zvikasaita mabasa acho sekuda kwedu. Nekudaro, zvinoita sekunge Apple inosiya aya mamiriro akachengetwa kuseva uye hazvigoneke kurodha zvakare (kubhadhara zvekare mukuwedzera) chikumbiro chatakange tambodzosa. Nekudaro, dambudziko iri rine mhinduro, isu tinokuudza nezvazvo mu iPhone News.
Sezvineiwo, kana iwe uchifunga kutenga chishandiso chawakambodzosa, meseji inowoneka isingatenderi iwe kuti utore chishandiso ichi, zvichiratidza kuti ichangodzoserwa kuchikumbiro chedu chekukumbira kudzorerwa, uye kuti iko kutenga kwatova kubviswa kana kudzoserwa mari yacho. Asi, kazhinji mwana wevanhu akadaro, uye tinofunga kutenga chimwe chinhu chatainge tambodzoka, nekuti pamwe yanga isiri iyo yakaipa, kana isu takafunga zvirinani nezvayo. Apple inoita kuti zviome kwatiri, asi nhanho dzekutevera kudzoreredza maapplication atakambodzoka anofanirwa kutevedzera anotevera matanho.
Isu tinopinda iyo iPhone Zvirongwa
Tinoenda ku «iTunes neApp Store»
Tinodzvanya pane yedu Apple ID uye tinobvisa
Isu tinovhura iyo App Store uye tinoedza kutenga iyo application zvakare
Kana tangoyedza kutenga iko kunyorera zvakare, zvinotikumbira kuti tiise yedu Apple ID zvakare, ndiyo nguva yekupindazve. Uku ndiko kutendera kwazvinoita kuti titenge zvikumbiro zvatainge tambodzosa, nekuti vanhu chete ndivo vanogumburwa pamusoro pebwe rimwechete kaviri. Kana iwe uine dambudziko nedudziro, inzwa wakasununguka kuisimudza mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa "Kudzorerazve isingavharike" pane iyo App Store
Rafa Diaz akadaro
Nezuro husiku chete ndakatumira email kuapuro nezvenyaya iyi nekuti zvaisazonditendera kuti nditenge Reeder 3 yekudzosa Reeder 2 kupfuura gore rimwe chete rapfuura, ndakabuda kubva kuApp Store imwechete uye hapana asi kuzviita sezvawakaisa kekutanga! Ndatenda
Pindura Rafa Díaz
carlos gomez akadaro
Mhoro mumwe mubvunzo!
Ndachinjana makatuni emwana wangu kubva kuTunes pane ipad yangu uye ndinogara ndichidzima mafirimu kuitira kuti ndirege kugara mundangariro dzangu uye zvakadaro ini ndinoda mumavhidhiyo zvinoita sekutarisa kana kurodha pasi uye dambudziko randinaro nhasi nderekuti ndinotora matatu mafirimu uye vadzime uye havawonekere kwandiri sevamwe vari muvhidhiyo nechisimba ndinofanira kuenda kuTunes uye kurodha pasi uye ini handidi kudhawunirodha nekuti zvinotora ndangariro zhinji uye ndinoda kuti vabude senge dzakapfuura idzo dzinondipa sarudzo yekutarisa kana kurodha pasi saka hazvibvise dzinenge 4 GB yemafirimu ese
Akandimirira kuti nditsanangure uye ini ndakamirira rubatsiro rwako, ndatenda.
Pindura kuna carlos gomez
Mune yangu kesi, ndaifanira kutangidza chishandiso pandakanga ndakura. Asi zvakazoshanda
Pindura kuna Gimeno